Amagqwetha oLawulo lwaMazwe ngaMazwe eNetherlands - Law & More
Umthetho wolawulo umalunga namalungelo noxanduva lwabemi kunye namashishini kurhulumente. Kodwa umthetho wezolawulo ulawula indlela urhulumente enza ngayo izigqibo kunye nento onokuyenza xa ungavumelani neso sigqibo. Izigqibo zikarhulumente ziphambili kumthetho wezolawulo. Ezi zigqibo zinokuba neziphumo ezibi kakhulu kuwe. Yiyo loo nto kubalulekile ukuba uthathe amanyathelo kwangoko ukuba awuvumelani nesigqibo sikarhulumente esineziphumo ezithile kuwe ...
YIBA NGOMLAYEZI WEMITHETHO YO-MDLALO
Umthetho wolawulo umalunga namalungelo noxanduva lwabemi kunye namashishini kurhulumente. Kodwa umthetho wezolawulo ulawula indlela urhulumente enza ngayo izigqibo kunye nento onokuyenza xa ungavumelani neso sigqibo. Izigqibo zikarhulumente ziphambili kumthetho wezolawulo. Ezi zigqibo zinokuba neziphumo ezibi kakhulu kuwe. Kungenxa yoko le nto kubalulekile ukuba uthathe amanyathelo kwangoko ukuba awuvumelani nesigqibo sikarhulumente esineziphumo ezithile kuwe. Umzekelo: ipemethe yakho iya kurhoxiswa okanye inyathelo lokunyanzeliswa liyakuthathwa kuwe. Ezi ziimeko onokuchasa ngazo. Ewe kunokwenzeka ukuba isichaso sakho saliwe. Unelungelo lokufaka umthetho wesibheno kunye nokwaliwa kwesichaso sakho. Oku kunokwenziwa ngokuthumela isaziso sesibheno. Amagqwetha ezolawulo e Law & More inokukucebisa kwaye ikuxhase kule nkqubo.
> Umthetho oMkhulu woLawulo
> Ukubeka esweni ulawulo
> Uxanduva lukarhulumente
> Iintloko zomthetho wolawulo
Umthetho oMkhulu woLawulo
UMthetho oMeleyo wokuLawula ngokuBanzi (Awb) uhlala udala inkqubo yezomthetho kwezona meko zininzi zolawulo. UMthetho oMeleyo wokuLawula ngokuBanzi (i-Awb) ubeka phantsi indlela urhulumente ekufuneka azilungiselele ngayo izigqibo, apapashe umgaqo-nkqubo kwaye zeziphi izinto zokwenza unyanzeliso ezifumanekayo.
Unganxibelelana nomthetho wolawulo ukuba ufuna imvume. Oku kunokuba yimizekelo yemvume yokusingqongileyo okanye imvume yotywala kunye nomoya wokubuk 'iindwendwe. Xa uziqhelanisa, kwenzeka rhoqo ukuba izicelo zempepha-mvume zinqatshelwe ngokungalunganga. Abemi banokuchasa. Ezi zigqibo kwimvume zizigqibo zomthetho. Xa uthatha izigqibo, urhulumente ubotshelelwe yimithetho enxulumene nomxholo kunye nendlela izigqibo ezenziwa ngayo. Kububulumko ukuba noncedo lwezomthetho ukuba uyala ukwala isicelo sakho semvume. Kuba le mithetho iyilwe kwisiseko semithetho esemthethweni esebenza kumthetho wolawulo. Ngokubandakanya igqwetha, unokuqiniseka ukuba le nkqubo iya kuqhubeka ngokuchanekileyo kwimeko yesichaso kwaye kwimeko yesibheno.
Ngamanye amaxesha akunakwenzeka ukufaka inkcaso. Kwinkqubo, umzekelo, ungenisa uluvo emva kwesigqibo sokuyila. Uluvo kukuphendula wena, njengeqela elinomdla, onokuthi ulithumele kwigunya elifanelekileyo ukuphendula kwisigqibo sokuyila. Igunya linokuthatha izimvo ezichaziweyo ukuba ziya kuthathwa nini isigqibo sokugqibela. Kububulumko ukufuna ingcebiso kwezomthetho ngaphambi kokungenisa uluvo lwakho malunga nokuthathwa kwesigqibo.
Inkxaso mali yenkxaso-mali kuthetha ukuba unelungelo lokufumana izibonelelo zemali kwiziko lolawulo ngeenjongo zokuxhasa ngemali imisebenzi ethile. Ukunikezelwa kwenkxaso-mali kuhlala kunesiseko esisemthethweni. Ukongeza ekubekeni imithetho, inkxaso-mali sisixhobo esisetyenziswa ngoorhulumente. Ngale ndlela, urhulumente uvusa indlela yokuziphatha enqwenelekayo. Inkxaso-mali ihlala iphantsi kwemeko. Ezi meko zinokujongwa ngurhulumente ukubona ukuba ziyazalisekiswa.
Imibutho emininzi ixhomekeke kwinkxaso-mali. Kodwa ngokuziqhelanisa kuyenzeka ukuba inkxaso-mali irhoxiswe ngurhulumente. Ungacinga ngemeko urhulumente anqumlayo. Ukhuseleko lwezomthetho luyafumaneka ngokuchasene nesigqibo sokurhoxisa. Ngokuchasa ukurhoxiswa kwenkxaso-mali, kwezinye iimeko, unokuqinisekisa ukuba ilungelo lakho kwinkxaso mali ligcinwa. Ngaba uyathandabuza ukuba inkxaso yakho irhoxisiwe ngokusemthethweni okanye uneminye imibuzo malunga neenkxaso-mali zikarhulumente? Emva koko uzive ukhululekile ukunxibelelana namagqwetha olawulo Law & More. Siya konwaba kukucebisa ngemibuzo yakho malunga neenkxaso-mali zikarhulumente.
Ukubeka esweni ulawulo
Kuya kufuneka ujongane norhulumente xa kusaphulwa imithetho kwindawo yakho kwaye urhulumente ekucela ukuba ungenelele okanye xa, umzekelo, urhulumente eza kujonga ukuba uyathobela imiqathango yemvume okanye eminye imiqathango ebekiweyo. Oku kubizwa ngokuba kukunyanzeliswa kukarhulumente. Urhulumente unokuhambisa abaphetheyo ukulungiselela le njongo. Abaphetheyo banokufikelela kuyo yonke inkampani kwaye bavunyelwe ukuba bacele lonke ulwazi olufanelekileyo kunye nokuhlola kunye nokuthatha ulawulo nabo. Oku akuthethi ukuba kukho ukrokrelo olunobuzaza lokuba imigaqo-nkqubo yaphulwe. Ukuba awusebenziseli kwimeko enjalo, wohlwaywa.
Ukuba urhulumente uthi kubenolwaphulo-mthetho, uya kunikwa ithuba lokuphendula kulo naluphi na unyanzeliso olucetywayo. Oku kunokuba, umzekelo, umyalelo ophantsi kwentlawulo yesohlwayo, umyalelo ophantsi kwetyala lolawulo okanye isohlwayo solawulo. Iipemethe zinakho ukurhoxiswa ngeenjongo zokunyanzelwa.
Umyalelo phantsi kwentlawulo yesohlwayo kuthetha ukuba urhulumente ufuna ukukunyanzela ukuba wenze okanye ukwala isenzo esithile, kwimeko leyo uya kuthi unetyala imali xa ungabambisani. I-odolo phantsi kwesigwebo sokuphatha iya ngaphaya koko. Ngomyalelo wolawulo, urhulumente uyangenelela kwaye iindleko zokungenelela zibangwa kuwe kamva. Oku kunokuba njalo, umzekelo, xa kusiza kudilizwa isakhiwo esingekho semthethweni, ukucoca iziphumo zokwephulwa kwendalo okanye ukuvala ishishini ngaphandle kwemvume.
Ngaphezulu, kwezinye iimeko urhulumente unokukhetha ukubeka isohlwayo ngomthetho wolawulo endaweni yomthetho wolwaphulo-mthetho. Umzekelo woku yifayile yolawulo. Isohlwayo solawulo sinokuphakama kakhulu. Ukuba ubekelwe isohlwayo sokuphatha kwaye awuvumelani nayo, ungabhenela kwinkundla.
Ngenxa yolwaphulo-mthetho oluthile, urhulumente unokuthatha isigqibo sokurhoxisa imvume yakho. Eli nyathelo linokusetyenziswa njengesohlwayo, kodwa kunye nokunyanzelwa ukuthintela isenzo esithile ukuba singaphindi.
Ngamanye amaxesha izigqibo okanye izenzo zikarhulumente zinokubangela umonakalo. Ngamanye amaxesha, urhulumente unoxanduva lwalo monakalo kwaye ungafaka ibango lomonakalo. Kukho iindlela ezininzi apho wena, njengosomashishini okanye umntu wangasese, onokwenza ibango ngomonakalo kurhulumente.
Isenzo sikarhulumente esingekho mthethweni
Ukuba urhulumente wenze into engekho mthethweni, urhulumente unganoxanduva lokujongana nawo nawuphi na umonakalo owubonileyo. Ngokwenzekayo, oku kubizwa ngokuba sisenzo sikarhulumente esingekho semthethweni. Le yimeko, umzekelo, ukuba urhulumente uyayivala inkampani yakho, kwaye ijaji emva koko yenza isigqibo sokuba oku bekungavumelekanga ukuba kwenzeke. Njengosomashishini, ungafaka ibango lokulahleka kwemali ngenxa yokuvalwa okwethutyana ngurhulumente.
Isenzo sikarhulumente esisemthethweni
Ngamanye amaxesha, unokufumana nomonakalo ukuba urhulumente wenze isigqibo esisemthethweni. Oku kunokuba njalo, umzekelo, xa urhulumente esenza utshintsho kwisicwangciso somhlaba, oya kuthi enze iiprojekthi ezithile zokwakha zenzeke. Olu tshintsho lungakhokelela ekuphulukaneni nengeniso yakho kwishishini lakho okanye ukuncitshiswa kwexabiso lekhaya lakho. Kwimeko enjalo, sithetha ngembuyiselo yomonakalo wesicwangciso okanye imbuyekezo yelahleko.
Abameli bethu bezolawulo bayakuvuyela ukukucebisa ngamathuba okufumana imbuyekezo ngenxa yesenzo sikarhulumente.
Inkcaso kunye nokubhena
Phambi kokuba inkcaso echasene nesigqibo sikarhulumente ingeniswe kwinkundla yezolawulo, kuya kufuneka kuqale inkqubo yenkcaso. Oku kuthetha ukuba kufuneka ubhale ngokubhaliweyo kwiiveki nje ezintandathu ukuba awuvumelani nesigqibo kunye nezizathu zokuba ungavumi. Izichaso mazenziwe ngencwadi ebhaliweyo. Ukusetyenziswa kwe-imeyile kunokwenzeka kuphela ukuba urhulumente ubonakalisile ngokucacileyo oku. Isichaso ngomnxeba asithathwa njengezichaso ezisemthethweni.
Emva kokuba kungeniswe isaziso sokuchasa, uhlala unikwa ithuba lokuchaza inkcaso yakho ngamazwi. Ukuba ungqinwe ulungile kwaye inkcaso ibhengezwe isekwe kakuhle, isigqibo esigqithisiweyo siya kubuyiswa kwaye esinye isigqibo siyakusitshintsha. Ukuba awungqinwa ulungile, inkcaso iya kubhengezwa ukuba ayinasiseko.
Isibheno ngokuchasene nesigqibo senkcaso sinokufakwa kwakhona kwinkundla. Isibheno kufuneka singeniswe ngokubhaliweyo kwisithuba seeveki ezintandathu. Ngamanye amaxesha inokwenziwa kwakhona. Inkundla kamva idlulisela isaziso sesibheno kwi-arhente karhulumente ngesicelo sokuthumela lonke uxwebhu olunxulumene nelityala kwaye luphendule kulo kwingxelo yezokhuseleko.
Ukuthethwa kwetyala emva koko kuya kucwangciswa kamva. Inkundla iya kuthi emva koko yenze isigqibo kwisigqibo esiphikisayo senkcaso. Ke, ukuba ijaji iyavumelana nawe, uya kurhoxisa isigqibo kwisigqibo sakho. Inkqubo ke ayikapheli. Urhulumente kuya kufuneka anike isigqibo esitsha malunga nesichaso.
Iintloko zomthetho wolawulo
Emva kwesigqibo esenziwe ngurhulumente, uneeveki ezintandathu ukufaka isikhalazo okanye isibheno. Ukuba awuphikisi ngexesha, ithuba lakho lokwenza into ngokuchasene nesigqibo liya kudlula. Ukuba akukho siphikiso okanye isibheno sifakiwe ngokuchasene nesigqibo, siya kunikwa ngokusemthethweni. Iya kuthathwa njengesemthethweni, zombini ngokwemo yayo nomxholo. Ixesha lokuthintelwa kokufaka inkcaso okanye isibheno, eneneni ziiveki ezintandathu. Kuya kufuneka ke uqinisekise ukuba uthatha inxaxheba kwezomthetho ngexesha. Ukuba awuvumelani nesigqibo, kufuneka ungenise isaziso senkcaso okanye isibheno kwisithuba seeveki ezi-6. Amagqwetha olawulo Law & More inokukucebisa kule nkqubo.
Singanikezela ngawe-in kuzo zonke iindawo zomthetho wolawulo. Cinga, umzekelo, ukungenisa isaziso senkcaso kwiSigqeba sikaMasipala ngokuchasene nokubekwa komyalelo phantsi kwentlawulo yesohlwayo okanye ukumangalelwa phambi kwenkundla ngokubhekisele ekunganikezelweni kwemvume yommandla wokutshintsha kwesakhiwo. Inkqubo yokucebisa yinxalenye ebalulekileyo yomsebenzi wethu. Kwiimeko ezininzi, ngeengcebiso ezifanelekileyo, unokuthintela iinkqubo kurhulumente.
Phakathi kwezinye izinto, sinokukucebisa kwaye sikuncede ngezi:
• ukufaka isicelo senkxaso-mali;
Izibonelelo eziyekiweyo kunye nokuphinda ziphinde zisebenze kwakhona
Ukumiselwa kwetyala lolawulo;
Ukwaliwa kwesicelo sakho semvume yendalo esingqongileyo;
Ukufaka inkcaso ekukhutshisweni kweempepha mvume.
Ukuqhubeka komthetho wezolawulo kuhlala kungumsebenzi wegqwetha lokwenyani, nangona uncedo lommeli alunyanzelekanga. Ngaba awuvumelani nesigqibo sikarhulumente esineziphumo ezibi kuwe? Emva koko nxibelelana namagqwetha olawulo e Law & More ngqo. Singakunceda!